Ma Aha Barcelona: Waa Kuwee Afarta Kooxood Ee Wadnaha U Galay Real Madrid?
Kooxda Real Madrid ayaa isku diyaarinaysa inay dhamaadka sannadka ka qayb gasho tartanka kooxaha adduunka ee loo yaqaano Club World Cup oo haddaba lasii ogyahay in afarta kooxood ee Al Ain oo ka dhisan waddanka UAE ee tartanka martigelinaya, Team Wellington oo kusoo guuleysatay Champions League waddamada Oceania kana dhisan New Zealand, Chivas de Guadalajara oo haysata...
Real Madrid Oo Raadinaysa Difaac Wanaagsan Oo Booska Ku Qabsada Sergio Ramos
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa suuqa ugu jirta raadinta laacib heer caalami ah oo ka ciyaara khadka dambe ee difaaca oo dhaliilo badan ka jireen tan iyo markii uu ka tegay laacibkii reer Portugal ee Pepe. Sergio Ramos iyo Raphael Varane ayaa ah labada laacib ee Los Blancos uga ciyaara difaaca, hase yeeshee dhibaatada jirta ayaa ah in aanu kooxda joogin hal ciyaartoy...
Waqigii uu furmayey suuqa iibka ciyaartooyada ee xilliga jiilaalka waxa ka hadhsan bilo dhawr ah, hase yeeshee kooxaha waaweyn ee Yurub waxay mar horeba isha lasii heleen laacibiintii ay ku xoojin lahaayeen naadiyadooda marka la gaadho xilligaas. FC Barcelona oo ka mid ahayd kooxaha ciyaartooyada badan soo iibsaday xagaagii, ayaa waxay suuqa soo socda ee bisha January...
Weeraryahanka xulka qaranka England ee Harry Kane ayaa meesha ka saaray inuu u baahan yahay waqti nasasho ah oo uu ka galo ciyaaraha caalamiga ah, xilli ay kusoo fool leedahay ciyaarta aadka loo sugayo ee ay Isniinta iskaga hor iman doonaan waddanka Spain. 25 jirkan ayaa lix gool oo kaliya u dhaliyey 16-kii kulan ee u dambeeyey naadigiisa Tottenham iyo xulka qarankaba,...
Real Madrid ayaa war kasoo saartay xaaladda dhaawac weeraryahanka reer France ee Karim Benzema oo wax ku noqday ciyaartii guul-darradu kasoo gaadhay ee Alaves ay martida ugu noqdeen Sabtidii. Karim Benzema ayaa garoonka laga saaray markii ay dhamaatay qaybtii hore, kaddib dhaawac muruqa ah oo haleelay, waxaana uu garoomada ka maqnaan doonaa ugu yaraan mudddo laba toddobaad...
David Moyes ayaa aaminsan in cadaadis uu ka yara qafiifay macalinka Manchester United Jose Mourinho ka dib guushii cajiibka aheyd ee ay ka gaareen Newcastle Sabtidii. United ayaa ka soo kabsatay labo gool oo looga hormaray islamarkaana ku badisay 3-2 kulankii Old Trafford iyagoo uga mahadcelinayay goolal ay qeybtii labaad u dhaliyeen Juan Mata, Anthony Martial iyo gool...
Daawo: Qaabkii Ay Xiddigaha & Tababaraha Real Madrid Uga Fal Celiyeen Goolkii Wakhtiga Dambe Ee Laga Dhaliyay
Kooxda Real Madrid ayaa la kulantay guuldaro wakhti dambe ah kulankii ay xalay la ciyaaraysay kooxda Alaves kana tirsanaa horyaalka La Liga todobaadkiisii 8-aad. Real ayaa ahayd kooxda awooda badan kulanka laakiin ku dhibaatooday in ay gaadhaan shabaqa Alaves maadama ay kooxda Martida loo ahaa si xoogan u difaacanaysay. Alaves ayaa daqiiqadii ugu dambaysay dhalisay goolka...
Tababaraha kooxda Real Madrid, Julen Lopetegui ayaa qiray in naadigiisu uu ku jiro xaalad adag kaddib labadii guul-darro ee xidhiidhka ahaa ee Alaves iyo CSKA Moscow. Real Madrid ayaan wax gool ah dhalinin in ka badan 400 daqiiqadood oo ka dhigan afar ciyaarood iyo badh, waxaana muuqata inay ku jirto qalalaase u baahan xal degdeg ah. Lopetegui ayaa lasoo jeedinayaa inay...
Cesc Fabregas ayaa ka sugaya kooxdiisa inay usoo bandhigto qandaraas cusub oo uu kula sii joogayo, wakhti uu dhamaad ku dhow yahay heshiiska uu kula joogo kooxda woqooyiga London. Laacibkan 31 jirka ah ayaa lumiyey booskii joogtada ahaa ee uu ku lahaa Blues tan iyo markii uu yimid tababare Maurizio Sarri, hase yeeshee dhaawac jilibka ahaa oo qayb ka qaatay maqnaanshihiisa...
Xidhiidhka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa guud ahaanba ka joojiyey ciyaaraha caalamiga dalka ku yaalla qaaradda Afrika ee Sierre Leone oo lagu eedeeyey in dawladdu soo farogelisay xidhiidhka kubadda cagta dalkaas. Xayiraaddan ayaa timid markii guddida la-dagaallanka musuqmaasuqa dalkaas ee ACC ay shaqada ka joojiyeen laba sarkaal oo ka tirsan xidhiidhka kubadda cagta...